भर्चुअल अफिस प्रोग्रामहरू, कर्पोरेट हेडक्वार्टर प्रोग्रामहरूको रूपमा पनि चिनिन्छन्
भर्चुअल अफिस एक सेवा हो जुन एक मेलि address ठेगाना र टेलिफोन रिसेप्शनिस्ट सेवाहरू प्रदान गर्दछ। कम्पनी जुन प्रयोग गर्दछ सेवा शारीरिक रूपमा अफिसमा काम गर्दैन। सामान्यतया धेरै कम्पनीहरूले भर्चुअल कार्यालय ठेगाना प्रयोग गर्दछ। नतिजाको रूपमा, यस सेवाले परम्परागत कार्यालय स्थान र रिसेप्शनिस्ट लागतहरूमा महत्त्वपूर्ण बचत प्रदान गर्दछ। थप रूपमा, धेरै व्यक्तिहरू वित्तीय सेटअपको लागि यो सेटअप प्रयोग गर्दछन्। त्यो हो, त्यसैले एक निगम वा LLC मा आयोजित सम्पत्ति मालिक, अधिकारी वा निर्देशकको ठेगानामा बाँधिएको छैन।
आभासी कार्यालय कार्यक्रम हो सबै 50 अमेरिकामा उपलब्ध छ र धेरै विदेशी देशहरू।
मनोनीत अधिकारी र निर्देशकहरू
मनोनीत गोपनीयता सेवा त्यो स्थान हो जहाँ हाम्रो एक सहयोगी सार्वजनिक रेकर्डमा तपाईंको अफिसरहरू र तपाईंको निगमका निर्देशक वा तपाईंको LLC को प्रबन्धकको रूपमा देखा पर्दछ। कम्पनीको स्वामित्व राखेर तपाईले सबै भोट अधिकारहरू समातेर मुख्य नियन्त्रण राख्नुहुन्छ। विशेष रूपमा तपाईसँग कागजातहरू छन् तपाईको स्वामित्वमा रहेको कम्पनी तपाईको हो। यद्यपि, कसैले तपाइँको कम्पनी वा तपाइँको नाम सार्वजनिक रेकर्डमा हेर्छ, तिनीहरूले तपाइँ र तपाइँको कम्पनी बीच कुनै सम्बन्ध देख्दैनन्। त्यसकारण, तपाईंसँग ठूलो कम्पनी खाता वा तपाईंको कम्पनीको नाममा दलाली हुन सक्छ। आँखा Prying सजीलै यो फेला पार्न सक्दैन।
थप रूपमा, यसले अज्ञात रूपमा तपाईंको लागि अचल सम्पत्तीको स्वामित्व लिन सक्छ। यसैले, तपाईको सम्पत्ति खोजी गर्दा भोकमरी आकस्मिक शुल्क वकीलले के देख्छ? थोरै भए पनि के तपाईंसँग पर्याप्त पैसा र अन्य सम्पत्तिहरू छन् जसले तपाईंलाई मुद्दा दायर गर्न सकोस्? सम्भव छैन, यदि तपाईं उचित कानुनी उपकरणहरूमा आफ्नो सम्पत्ति स्वामित्व पाउनुहुन्छ भने।
भर्चुअल अफिस बेनिफिटहरू
जब तपाईं निहित हुन्छ त्यहाँ धेरै लाभहरू छन् शामिल वा एक LLC फारम। यो विशेष गरी केस हो जब तपाईं नेवाडा वा गठन गर्नुहुन्छ एक बैंक खाताको साथ Wyoming LLC। यो किनभने यी दुई क्षेत्र मा सम्पत्ति संरक्षण कानून धेरै अन्य राज्यहरु भन्दा बाहिर छन्। अफशोर क्षेत्राधिकारमा अझ बढी सम्पत्ति सुरक्षा लाभहरू छन्, जस्तै नेभिस एलएलसी। सबै भन्दा माथि, कानून हो कि शेयर होल्डरहरू, अधिकारीहरू र निर्देशकहरूको सुरक्षा लिनुहोस्। नेभाडा र वायोमिंग अमेरिकामा सब भन्दा बलियो छन्। यसका कुनै पनि राज्यमा कुनै पनि कर्पोरेट राज्य आयकर छैन। नेविस सबै भन्दा शक्तिशाली छ। त्यस्तै, यस लोकप्रिय स्थानमा कुनै आय कर छैन। अब, अमेरिकी व्यक्तिलाई विश्वव्यापी आम्दानीमा कर लगाइन्छ, यसको मतलब त्यहाँ न्यायालयमा फाईल गर्नको लागि कुनै थप आय कर फारमहरू छैनन्।
अधिकांश व्यक्तिहरूले यी प्राथमिक कारणहरूको लागि नेवाडा, वाइमिंग वा अपतटीय कम्पनीहरू प्रयोग गर्छन्:
· या त उनीहरूको निवासमा एक व्यवसाय सञ्चालन गर्न, वा,
व्यक्तिगत सम्पत्तिको संरक्षण र गोपनीयता र गोप्यता बढाउनको लागि
यी दुवै कारणहरूले तपाइँको व्यवसायको लागि अत्यन्त लाभदायक साबित गर्न सक्दछ। तर तपाइँले चाहानु भएको फायदाहरू देख्न पक्का सुनिश्चित गर्न सक्ने कदमहरू छन्। साथै, तपाईंले माथिको छलफल गरेको छ जस्तै तपाइँले तपाइँको गोपनीयतालाई अझ बढाउन उम्मेदवार सेवाहरू थपेर यी लाभहरू अझ बढाउन सक्नुहुन्छ।
तपाईंको होम स्टेटमा नेभाडा वा विमिंग कर्पोरेट
50 राज्यहरूमध्ये कुनै पनिमा बनाइएको एक निगमले सबै राज्यहरूमा व्यवसाय सञ्चालन गर्न सक्छ। उदाहरणका लागि, हामी भन्छ कि क्यालिफोर्नियामा बस्न र ट्रकिंग कम्पनीको मालिक भन्छौं। तपाईं आफ्नो कर देयता कम गर्न र आफ्नो सम्पत्ति को लागि थप सुरक्षा प्रदान गर्न चाहनुहुन्छ। त्यसैले, तपाईं आफ्नो ट्रकिंग कम्पनीको लागि एक नेवाडा निगम बनाउनुहुन्छ, त्यसपछि क्यालिफोर्नियामा एक विदेशी निगमको रूपमा दर्ता गर्नुहोस्। यो "विदेशी योग्यता" को रूपमा चिनिन्छ। "क्यालिफोर्निया राज्यले त्यो राज्यबाट व्युत्पन्न कुनै पनि आय।
तथापि, तपाईंको निगमले नेभडामा कि राज्यमा व्युत्पन्न कुनै पनि आयमा कर-रहित स्थितिको आनन्द उठाउन सक्छ। यही कुनै पनि अन्य राज्यको लागि जान्छ जहाँ यसले सञ्चालन गरेको करको मुक्त कानुनहरू थियो, वा कुनै "विदेशी योग्यता" आवश्यकताहरू छैनन्। तपाईंले यी कर फायदाहरूको आनन्द लिनको लागि, तथापि, यो "निवासी" व्यवसाय हुनुपर्छ। हामीले उल्लेखित आवश्यकताहरू यो निर्धारित गर्नेछ।
गोपनीयता बढाउनुहोस् र सम्पत्ति सुरक्षित गर्नुहोस्
नेवाडा कर्पोरेटहरूले निर्देशकहरू, अधिकारीहरू, र स्ट्यान्डहोल्डहरू (मालिकहरू) को लागि अनौपचारिक गोपनीयता र उत्कृष्ट सम्पत्ति संरक्षण प्रदान गर्छन्। न्युडा निगमले खर्च गरेको कुनै पनि ऋण वा दायित्वको लागि अधिनियम, न शेयर स्टकहोल्डरहरू, र नचाहिने अधिकारी / निर्देशकहरू जिम्मेवार हुन सक्छन्। न त स्टकहोल्डर नामको सार्वजनिक रेकर्डको नाम हो। केवल निदेशक र पंजीकृत एजेन्टहरू सार्वजनिक रेकर्डको कुरा हुन्। कसैले पनि यी स्थानहरूलाई निजी रूपमा व्यवस्थित गर्न सक्छ। Nominee नियुक्तिहरूको उपयोग गरेर, उदाहरणका लागि, निगमले "साँचो" मालिकहरूको गोप्यता र गोपनीयता बढाउन सक्छ। हाम्रो विश्वसनीय Nominee सेवा प्रयोग गरेर, तपाईं आश्वस्त हुन सक्नुहुनेछ कि तपाईंको नाम अनन्त आक्रोशित आँखालाई गोपनीय राखीनेछ।
उदाहरणका लागि, तपाईं आफ्नो नेवाडा निगममा सीधा केहि व्यवसाय र लगानी मुनाफा तिर्न सक्नुहुन्छ। यसले गोपनीयता बढाउन र सम्पत्तिको सुरक्षा गर्न सक्छ। एक यो तपाईंको घर राज्य मा एक निगम स्थापित गरेर यो पूरा गर्न सक्छन्, त्यसपछि नेवाडा मा अर्को निगम। नेभडा कम्पनी, बारीमा, तपाईंको गृह-राज्य निगमबाट ट्रांजिक्ट र आय प्राप्त गर्न प्रयोग गर्न सकिन्छ। तसर्थ, तपाईंले आफ्नो गृह राज्यमा सञ्चालन गर्ने व्यवसायले नेवाडामा आफ्नो निगम भाडामा लिन सक्छ। यो व्यवस्थापन, परामर्श, वा व्यापारिक आपूर्तिको बिक्रीको लागि यस्ता कुराहरू हुन सक्छ।
शारीरिक उपस्थिति आवश्यकता मानिन्छ
किनकी तपाईंले आफ्नो निगमलाई नेवाडामा निवासी निगमको रूपमा स्थापना गर्नु भएको छ (हाम्रो सरल, कुशल नेवाडा अफिस कार्यक्रम वा नेभाडा वर्चुअल अफिस प्रोग्राम) प्रयोग गरी, र हाम्रो नामेनी गोपनीयता सेवा मार्फत उम्मेदवारी अधिकारी नियुक्तिको लागी, तपाईंको निगमले यसलाई सावधानीपूर्वक पैसा कमाउनेछ। गोप्य गोप्यता संग। तपाईं नेवाडा निगमबाट आफ्नो वेतन तिर्न सक्षम हुनुहुनेछ। किनभने सी निगमको संघीय कर लगभग सबै कर कोष्ठकहरूमा व्यक्तिगत दर भन्दा कम छ, तपाईले थप कर बचत गर्न सक्नुहुनेछ। (फेरि, यदि एक निगमले कर्पोरेट आयकरको साथ एक राज्यमा सञ्चालन गर्दछ, यसले राज्यको कर कर कानुनहरू पछ्याउनु पर्दछ। यसले यसले नेवाडामा सञ्चालन गर्दा आयकर-रहित फाइदाहरू समावेश नगर्न सक्छ। एक ज्ञात करको साथ जाँच गर्नुहोस्। सलाहकार)।
अर्को उदाहरण: यदि तपाईंसँग पर्याप्त शेयर बजार लगानी छ भने, तपाईं यी लगानीहरू राख्नको लागि नेभिडा सीमित देयता कम्पनी ("LLC") बनाउन सक्नुहुन्छ। त्यसपछि तपाइँ यी लगानीहरू प्रबन्ध गर्न नेवाडामा आफ्नो निगमको प्रबन्ध गर्न सक्नुहुन्छ, र LLC को माध्यम ले यी लगानीबाट "नेवाडामा तपाईंको निगमको शुल्क" प्रबन्धित सेवाका लागि भुक्तानी गर्नुहोस्। सबै बेला तपाईंको नाम यस निष्क्रिय को कमाईको रूपमा दर्ता गरिनेछ, र विस्तारित गरेर कर, आय।
भर्चुअल अफिस कार्यक्रम के हो?
तपाईंको नेवाडा निगम द्वारा प्रदान गरिएको अधिकतम वित्तीय गोपनीयता, सीमित दायित्व, र सम्पत्ति सुरक्षाबाट फाइदा लिन यो निश्चित "अवशिष्ट" आवश्यकताहरू पूरा गर्नुपर्छ। तपाईं पर्याप्त साबित गर्न सक्षम हुनुहुने छ कि तपाईंको निगम नेवाडामा एक वैध, परिचालन व्यवसाय हो।
त्यसो गर्न, यसले यी चार साधारण परीक्षणहरू पास गर्नुपर्छ:
कम्पनीसँग एक नेवाडा व्यवसाय ठेगाना हुनुपर्छ, प्राप्तिहरू, वा समर्थन कागजातको रूपमा प्रमाणको रूपमा।
यो एक नेवाडा व्यापार टेलिफोन नम्बर चाहिन्छ। 
एक नेवाडा व्यवसाय इजाजतपत्र हुनुपर्छ
निगम वा LLCसँग कुनै प्रकारको नेविडा बैंक खाता हुनुपर्छ (जाँच, ब्रोकरेज खाता, आदि)।
भर्चुअल अफिस इफेक्टिटी
जस्तै यी आवश्यकताहरु द्वारा स्पष्ट छ, एक साधारण PO बक्स या उत्तर सेवा पर्याप्त छैन। मस्टर पास गर्न को लागी, तपाईंको नेवाडा निगमको समर्थनमा एक जीवित, सासिंग कार्यालय हुनु पर्छ। अफिसमा खोल्नु र त्यसो त ठोक्किनु हो कि यो एकदम महंगी हुन सक्छ, खासकर यदि नेवाडामा निगम तपाईंको कर-कटौती रणनीतिको विस्तार हो र तपाई आफ्नो कम्पनीमा आफ्नो लगानी बढाउने प्रयास गर्दै हुनुहुन्छ। कार्यालय खोल्दा, तपाईंले भाडा, कर्मचारी, उपयोगिताहरू, टेलिफोन र डेटा सेवाहरू, रोजगारी करहरू, आपूर्तिहरू, र बीमालाई कारवाही गर्नुपर्नेछ। चलो यी "मासिक लागत" परिप्रेक्ष्यमा राख्नुहोस्:
कार्यालय किराया $ 1500
टेलिफोन र डेटा $ 100
रोजगार करहरु $ 300
कुल: $ 6000 ($ 72,000 / वर्ष।)
यी लागतहरू एक महिनामा $ 6,00 को धुनमा छिटो थपियो। वास्तवमा, यी अपेक्षाकृत रूढिवादी लागत अनुमानहरू छन्, वास्तविक क्षमताको मूल्य धेरै अधिक संग। 12 द्वारा यो आंकडा बहुभाषी गर्नुहोस्, र तपाईंले देख्न सक्नुहुन्छ कि एक आधारभूत "आधार सञ्चालन" कार्यालयले तपाईंको निगमको खर्च गर्न सक्छ। $ 72,000 एक वर्ष.
तर हामीसँग तपाईंको आवश्यकताहरू पूरा गर्न समझदार समाधान छ! हामी तपाईंको कम्पनीको लागि मात्र यो पूरा गर्न सक्दछौं $ 995 देखि $ 2,995 पुरा वर्ष को लागि, तपाइँले चयन गर्नुभएको प्याकेजमा निर्भर गर्दछ। हाम्रो नेवाडा वा वाइमिंग अफिस कार्यक्रम (नेभिडा वा वाइमिंग भर्चुअल अफिस कार्यक्रमको रूपमा पनि जानिएको छ), हामी तपाईंको निगमलाई उचित कार्यालय र व्यवसाय ठेगाना (नियुक्तिद्वारा उपलब्ध) प्रस्ताव गर्दछौं, नियमित कारोवार घण्टाको समयमा ठेकेदार व्यक्ति द्वारा संचालित तपाईंको (साझेदारी) व्यापारिक टेलिफोन नम्बर, निजीकृत मेल अग्रेषण सेवा, र बैंक वा ब्रोकरेज खाताहरू खोल्न सहयोगको साथ। हामी हाम्रो धेरै तटस्थ स्थानहरु मा समान सेवा प्रदान गर्दछौं।
हाम्रो कम्पनीहरु मा शामिल नेवाडा निगम कार्यालय कार्यक्रम शामिल हो:
एक वास्तविक नेवाडा सडक ठेगाना - 8AM बाट 5pm सम्म अनुबंधित कर्मचारीहरु संग काम गरिन्छ
प्यासिफिक समय सोमबार देखि शुक्रबार।
मेल फर्वार्डिङ सेवा तपाईंको आवश्यकताहरूमा व्यक्तिगत
एक नेवाडा साझा गरिएको टेलिफोन नम्बर लाइभ रिसेप्टिस्ट द्वारा जवाफ दिईयो
एक नेभाडा फ्याक्स नम्बर
यदि चाहनुहुन्छ भने नेवादा बैंक खाता खोल्न मद्दत गर्नुहोस्
एक नेवाडा व्यवसाय इजाजतपत्रको लागि मद्दत आवेदन
व्यापारिक घण्टाको समयमा तपाईंको कल्याणलाई स्वागत गर्न प्रत्यक्ष अनुबंध कर्मचारीहरू।
कम्पनीहरू नेभिडा वर्चुअल कार्यालय प्रोग्रामले प्रति महिना केवल $ 110 खर्च गर्दछन् यदि तपाइँ एक-एक वर्षको न्यूनतम प्रतिबद्धताको साथमा महिना-मासिक आधारमा भुक्तानी गर्नुहुन्छ, तर फेरि, तपाईं वार्षिक भुक्तानीको लागि हाम्रो $ 325 छुटको लाभ लिन सक्नुहुन्छ। तपाइँ पूर्ण सेवाको लागि केवल $ 995 तिर्नुहुन्छ।
पारंपरिक अफिसमा बचत
यी संकुलहरूले हजारौं डलरलाई अपरेटिङ व्ययमा बचत गर्न सक्दछन्, जबकि तपाईंको सबै कडा कमाई, र प्राप्त गरी, कर कटौतीको संरक्षण गर्दछन्।
हाम्रो नेवाडा कर्पोरेट अफिस कार्यक्रमले भेट्टाएको र नेभाडा निगम निर्धारणको लागि आवश्यक सबै मानकहरू सन्तुष्ट गर्दछ। साथै, यी सेवाहरू एक ज्ञात, मित्रवत व्यावसायिक तरिकामा डेलिभर गरिएका छन्। अनुभवी कर्मचारीहरू जसले 30 भन्दा बढी वर्षका लागि यी प्रकारका सेवाहरू प्रदान गरिरहेको छ तपाईंको कामलाई सँभाल्छ। त्यसोभए, हामी यो कार्यक्रम हाम्रो उच्च मात्राको व्यापार र कुशल संगठनको कारण यस्तो मूल्यको मूल्यमा प्रस्ताव गर्न सक्छौं।
यस पृष्ठको संख्या वा माथि प्रदान गरिएको फारम तपाईंको कम्पनीहरूको साथ उपलब्ध अजीब ट्याक्स बचतहरू र PRIVACY विकल्पहरू थप जानकारी प्राप्त गर्न प्रयोग गर्न सकिन्छ। भर्चुअल कार्यालय कार्यक्रम समावेश गरिएको छ।